चितवनका अस्पतालमा पनि आईसीयू बेडको अभाव हुँदै - Kohalpur Trends
चितवनका अस्पतालमा पनि आईसीयू बेडको अभाव हुँदै
२८ वैशाख, चितवन । चितवनका ठूला अस्पतालका आईसीयूहरु कोरोना संक्रमितले लगभग भरिने क्रममा पुगेका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले दिएको तथ्यांकअनुसार भरतपुर अस्पतालले कोरोना संक्रमितका लागि छुट्टाएको १० बेडको आईसीयू भरिएको छ भने चितवन मेडिकल कलेजले छुट्टाएको १६२ मध्ये १५८ बेड भरिएको छ ।
पुरानो मेडिकल कलेजमा ९० बेड कोभिड आईसीयूमध्ये ६२ बेड भरिएको छ । बाहिरका केही निजी अस्पतालका १० बेड आईसीयूमा कोभिडका बिरामी राखिएको छ । चितवनका विभिन्न अस्पतालमा गरेर ४३० जना कोभिडका बिरामीले उपचार गराइरहेका छन् ।
कोभिड आईसीयूमा २४० जना छन् । कुल बिरामीको झण्डै ५६ प्रतिशत आईसीयूमा उपचाररत छन् । भेन्टिलेटरमा ४९ जना, एचडीयूमा ६३ जना कोरोनाका बिरामीहरुको उपचार भइरहेको छ । उपचाररत संक्रमितमध्ये आधाभन्दा बढी चितवन जिल्ला बाहिरका छन् ।
यही अनुपातमा बिरामीको संख्या बढ्ने हो भने, एक–दुई दिनमा चितवनका ठूला अस्पतालमा कोभिडका बिरामीले आईसीयू नपाएर अकाल मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
अहिले भइरहेका आईसीयूहरुलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा लागिरहेको चितवन मेडिकल कलेजका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रताप देवकोटाले बताए । ‘१५८ बाट १८३ जना बिरामी केही दिनमा नै पुग्छन् त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौ र ? अस्पतालको आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हुन जान्छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा आईसीयू खाली हुन वा पाउन कि त बिरामी निको भएर वार्डमा सार्नुपर्छ कि त बिरामी आईसीयूमै मर्नुपर्छ यो दुःखद अवस्था हाम्रो नजिकै देख्छु म ।’
‘बिरामी ल्याउनुस् भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन, गम्भीर बिरामी नभई त कसैले पनि हेलिकप्टरमा ल्याउँदैन,’ देवकोटाले भने, ‘तर हामीकहाँ अब आईसीयू भरिएको छ, ल्याउनुस् भन्ने अवस्था पनि विस्तारै कम हुँदैछ ।’
उनले चितवन मेडिकल कलेजले आफ्नो अधिकतम क्षमतामा कोभिडको उपचार गरिरहेको बताए । अहिले यहाँ १७७ जना कोभिडका बिरामीको उपचार भइरहेको छ । भेन्टिलेटरमा ३६ जना राखिएका छन् । देवकोटाले काठमाडौं, दाङ, नेपालगञ्जलगायतका ठाउँबाट कोभिडका बिरामीलाई हेलिकप्टरमा राखेर चितवन उपचारका लागि ल्याउने गरिएको बताए ।
‘बिरामी ल्याउनुस् भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन, गम्भीर बिरामी नभई त कसैले पनि हेलिकप्टरमा ल्याउँदैन,’ देवकोटाले भने, ‘तर हामीकहाँ अब आईसीयू अलमस्ट भरिएको छ, ल्याउनुस् भन्ने अवस्था पनि विस्तारै कम हुँदैछ ।’
यता, पुरानो मेडिकल कलेजमा १३ जनालाई भेन्टिलेटरमा राखिएको छ । उक्त अस्पतालले ९० बेड कोभिड आईसीयूका लागि छुट्टाएकोमा ६२ जना कोरोना उपचाररत छन् । बाँकी २८ जना रिपोर्ट नआएका तर संक्रमणको आशंका गरेर आईसीयूमा राख्नुपर्ने बिरामी राखिएको अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकृत दुर्गा न्यौपानेले बताए ।
‘अब एउटा पनि थप संक्रमित बिरामी अस्पतालले राख्न सक्ने अवस्था छैन, उनले भने, ‘आईसीयू थप गर्ने भन्ने कुरा छ तर सबै पूर्वाधार चाहिने हुँदा केही समय त लाग्छ, त्यतिन्जेल अहिले भएको आईसीयूमा जति अट्छ त्यति राख्ने हो ।’
जिल्लाकै ठूलो सरकारी अस्पताल भरतपुर अस्पतालले कोरोनाका बिरामीको संख्या बढ्दै गएपछि बेड र जनशक्ति थप गरेको छ । अस्पतालले बेड थप गर्दै १६५ पुर्‍याएको छ भने १३६ जना जनशक्ति थप गरेको हो ।
अस्पतालका कायम मुकायम मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. जगन्नाथ तिवारीले अहिले भएको १४५ कोभिड बेड थप गर्दै १६५ पुर्‍याएको जानकारी दिए । ‘अहिले हामीलाई चाहिएको कोभिड आईसीयू हो,’ उनले भने, ‘बेडभन्दा पनि आईसीयूको खाँचो छ, जनरल आईसीयूलाई कोभिड आईसीयू बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।’ अस्पतालमा अहिले जम्मा १० बेड मात्रै कोभिड आईसीयू छ ।
अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिमा दरबन्दी सिर्जना गरी १३६ जना जनशक्ति थप गरेको छ । जसमध्ये १०८ जना नर्स, २४ जना मेडिकल अफिसर, तीन जना रेडियोग्राफर र एक जना बायोइञ्जिनियर छन् ।
२४ घण्टामा १० जना संक्रमितको मृत्यु
चितवनका अस्पतालहरुमा पछिल्लो २४ घण्टामा १० जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका अनुसार भरतपुर अस्पतालमा ३ जना, चितवन मेडिकल कलेजमा ५ जना, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस (पुरानो मेडिकल कलेज)मा १ जना र अन्य अस्पतालमा १ जनाको मृत्यु भएको हो ।
मृत्यु हुनेमा रुपन्देहीका दुई, चितवनका ३, तनहुँ, नवलपरासी र कपिलवस्तुका एक÷एक जना छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा विभिन्न अस्पतालबाट ४४ जना डिस्चार्ज भएर घर गएका छन् ।
नगरपालिकाले बनाएका अक्सिजनसहितका आइसोलेसनमा छैनन् बिरामी
भरतपुर महानगरपालिकाबाहेक जिल्लाका सबै स्थानीय तहले कोरोना संक्रमितका लागि भनेर अक्सिजनसहितको आइसोलेसन सेन्टर बनाएका छन् । ती सेन्टरमा नगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई परिचालनसमेत गरिएको छ । आइसोलेसनमा संक्रमितहरु बसेको भने देखिएको छैन ।
रत्ननगर नगरपालिकाले अक्सिजनसहित २८ बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाएको छ । एक जना बिरामी मात्रै अहिले आइसोलेसनमा छन् । खैरहनी नगरपालिकाले ११ बेड अक्सिजनसहित १५ बेड, राप्ती नगरपालिकाले अक्सिजनसहित २० बेड, कालिका नगरपालिकाले अक्सिजनसहित १२ बेड, इच्छाकामना गाउँपालिकाले १० बेड अक्सिजनसहित २० बेड र माडी नगरपालिकाले ५ बेड अक्सिजनसहित १० बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाएका छन् । तर ती आइसोलेसन सेन्टरमा कोरोना संक्रमित बसेका छैनन् ।
नगरपालिकाको आइसोलेसनमा भन्दा घरमा नै आइसोलेसनमा बस्ने संख्या अधिक छ । स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका अनुसार जिल्लामा २ हजार ९०९ जना सक्रिय कोरोना संक्रमित छन् । तीमध्ये २ हजार ७०९ जना होमआइसोलेसनमा छन् भने अस्पतालमा दुई सय जना उपचाररत छन् ।
Previous Previous post: प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारसँग माग्यो ४ हजार थान अक्सिजन सिलिण्डर
Next Next post: बाँकेमा एकैदिन १८ जना संक्रमितको मृत्यु